Nkɔmbɔ Kwan Do | Akenkan & Nkyerɛkyerɛ
Nkɔmbɔ Kwan Do
DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Kasa dɛ mbrɛ ekasa dabaa no, na ma mbrɛ isi tse nka wɔ asɛntsir no nye w’etsiefo no ho no nda edzi.
Sie abotar siesie wo ho na bɔ ho mpaa. Bɔ mpaa hwehwɛ Jehovah no mboa na ama edze w’adwen eesi asɛm a ebɛkã no do na nnyɛ woara woho do. Ma nsɛntsitsir a epɛ dɛ ekã ho asɛm no ntsena w’adwen mu. Fa wankasa wo nsɛm kyerɛkyerɛ nsɛm mu; mma nnkenkan nsɛm no a woetsintsim no ara kɛkɛ.
Sɛ eyɛ w’adwen dɛ ebɛkenkan asɛm bi efi Bible anaa asafo nwoma fofor bi mu a, hu no mu nsɛm no yie na ama w’akenkan no aatoatoa mu. Sɛ ebɛkenkan asɛm a obi akã a, fi nkãtse mu kenkan, naaso mma nnyɛ ma ɔnntra do.
Fi w’akoma mu kasa. Dwen siantsir a ohia dɛ w’etsiefo no tse asɛm no ho. Fa w’adwen si hɔn do. Eyɛ dɛm a mbrɛ isi gyina hɔ, mbrɛ isi totow wo nsa, nye mbrɛ isi yɛ w’enyim no bɛkyerɛ dɛ ifi w’akoma mu na erekasa, na ɔbɛda anyɛnkofa su edzi.
Kasa dɛ mbrɛ ekasa dabaa no, naaso ɔno nnkyerɛ dɛ fa wo nsɛm no dzi agor anaa kasa dɛ mbrɛ epɛ biara. Sɛ edze nsɛm a no mu da hɔ nye kasa ho mbra dzi dwuma a, ɔbɛma enyidzi a ɔwɔ asɛm a erekã no mu no ada edzi.
Hwɛ w’etsiefo no enyim. Sɛ ɔnnyɛ mfom wɔ beebi a ewɔ no dɛ ebɔkɔ do ahwɛ w’etsiefo no enyim a, yɛ no dɛm. Sɛ erema ɔkasa a, dɛ nkyɛ ebɔhwɛ dɔm no anaa edze w’enyiwa bɛfa hɔn mu kɛkɛ no, hwɛ etsiefo no enyim nkorkor.
Sɛ erekasa a, ebɛyɛ dɛn aka w’etsiefo no hɔn akoma ato hɔn yamu?
Fa mona Fa mona Nkɔmbɔ Kwan Do
Akenkan Na Nkyerɛkyerɛ​—Nkɔmbɔ Kwan Do
th adzesua 2 kr. 5